ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုး ရှင်ကြီးကျားထက်ဆိုး(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုး ရှင်ကြီးကျားထက်ဆိုး(၂)
ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုး ရှင်ကြီးကျားထက်ဆိုး(၂)
Posted by etone on May 16, 2011 in Short Story |4comments
” မမြအေးရေ … ကျုပ်တို့ ဆေးလာစစ်ရင်း လာတာ ….တစ်ရက်ပဲ တည်းမှာပါ အေ့ …၊ ညည်းလည်း ဝလာလိုက်တာ စီးပွားရေးလည်း ပြေလည်ပုံရတယ် … ။ ”
” ကြီးကြီကျင်ရေ … ကျမသမီးလေး ရန်ကုန်မှာ အလုပ်ရပြီး စုဆောင်းပို့တာရယ် … ကျမ နောက်အိမ်ထောင်ကလည်း ပိုက်ဆံအရှာ တော်တာရယ်ကြောင့် အခုကျမအိမ်မှာနေရင်း ဆိုင်လေး တစ်ဆိုင် ဖွင့် နိုင်နေပြီလေ … ။ စားဖို့ သောက်ဖို့တော့ ချောင်ချောင်လည်လည် ဖြစ်တာပေါ့ … ။ ”
” အေး အေး ဝမ်းသာပါတယ် …. ဒါနဲ့ ညည်းသမီးလေးက ရန်ကုန်သွားအလုပ်လုပ်တာ အဆင်ပြေသလား အေ့ … ။ ”
” ပြေလိုက်တာမှ လွန်ပါရောပဲ ကြီးကြီးရေ … ကျမသမီးလေးက သူများလို ဟော့ဟော့ရမ်းရမ်းမရှိပဲ အသုံးစွဲ စိစပ်တယ်ဆိုတော့ တစ်လ ၊ တစ်လ သူရတာလေးတွေ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် စုပြီး ကျမဆီကို ပြန်ထည့်ပေးတတ်တယ် …. အရမ်း လိမ္မာတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့ ”
” ကြားရတာ ဝမ်းသာစရာကြီးပဲ မမြအေးရေ …. သမီးလိမ္မာတော့လည်း ညည်း အတွက် အားဖြစ်စေတာပေါ့ အေ ”
” ဟုတ်တယ် ကြီးကြီးရေ … ကျမသမီးလေးက ရန်ကုန်က အထည်ချုပ်စက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ရတယ်လေ … အဆောင်နေရင်း အလုပ်လုပ်ရတာ အလုပ်ချိန်ကလည်း များတော့ ညဘက်အချိန်ပိုဆင်းလျှင် ထမင်းလည်း ကျွေးတော့ … တစ်နပ်စာပဲ ကုန်တယ်လေ … ဒါကြောင့် ပိုစုဖြစ်တာ … ။အလှအပနဲ့ အပိုလည်းမသုံးတတ်ဘူး … လုပ်သက်ကလည် းရလာတော့ စုမိဆောင်းမိတာပါ …. ”
“ကောင်းတယ် … ကောင်းတယ် … မွေးရကျိုးနပ်လိုက်တာအေ … ”
” ကြီးကြီးတို့လည်း ဆာရောပေ့ ါ… ထမင်းပွဲပြင်လိုက်တော့မယ်နော် … ”
” ဦးလေးတင် ထမင်းစားကောင်းရဲ့လား …. ရောက်လာမယ် ကြိုမသိတော့ အဆင်ပြေတာလေးပဲ ချက်ထားလိုက်ရတယ် … ”
” မမြအေးလက်ရာကတော့ အရင်ကအတိုင်းပဲဟေ့… ။ ဒါကြောင့်လည်း ငါတို့ရွာမှာ ထမင်းဆိုင်ဖွင့်တုန်းက ဆိုင်လူစည်တာ … အခုလည်း စားလို့ကောင်းကောင်းနဲ့ စားလိုက်တာ ဗိုက်တောင်အတော်ပြည့်သွားပြီး အိပ်ချင်လာတယ် … ငါခဏ မှေးလိုက်ဦးမယ် မယ်တင်နဲ့ စကားလေးဘာလေး ပြောကြပေါ့”
” ကြီးကြီးတင် ခံတွင်းပျက်လို့လား သိပ်မစားသလိုပဲနော် … ”
” မစားတာ မဟုတ်ဘူး မမြအေးရေ … စားချင်စိတ်ရှိပေမဲ့ စားလို့မဝင်တာအေ့ … ဒါကြောင့်လည်း ဆေးလာစစ်ရတာပေါ့ … လူလည်း တဖြေးဖြေး ပိန်လာပြီ …. ”
“နောက်နေ့ ဈေးသွားမှ ပုစွန်ထုတ်ဆီပြန်ဟင်းချက်ပေးမယ် ကြီးကြီးရေ… ထမင်းစားကောင်းအောင်လို့ပါ … တစ်ခါတစ်လေ လာရတဲ့လူကို ကျမတို့ ဒီလောက်တော့ ဧည့်ဝတ်ပြုချင်လို့ပါ …. ။ ”
” သာဓုပါအေ … သာဓုပါ … သာဓုပါ … ”
” ဟေ့ … မိခင်ကြိုင်လာစမ်းပါဦး … ညည်း အိမ်သာ သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ရသေးဘူးလား … ဒီမှာ မဲညစ်နေတာပဲ .. ။ဒီဝမ်းမဲမဲတွေ ဘယ်သူသွားထားတာလဲ … ”
“သမီးမနက်ကတည်းက သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးပါပြီ အန်တီမြရဲ့ … ခုဟာက ခုဏက ဧည့်သည် အဒေါ်ကြီး အိမ်သာထဲဝင်သွားတာ … ”
” အော် … အေး … ဒါဆိုလည်း ဆေးကြောထားလိုက်ဦး ”
“ဒေါ်ကျင် ရှိလား … ဒေါ်ကျင် … ဒေါ်ကျင် .. ဆေးစစ်ချက်ရပါပြီ …. ”
” ဟုတ် …ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်… ။ ”
” ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေကို ဝင်ပြပြီး ဆွေးနွေး၊ လိုအပ်တဲ့ ဆေးတွေ ဝယ်ယူပြီး မှ ပြန်ပါ ”
” ဟုတ်ကဲ့… ”
” ဆရာ ဒေါ်ကျင် ရောက်ပါပြီ … ။ ”
” ကဲ အဒေါ် ထိုင် …… ဆေးစစ်ချက်ပြပါဦး …. ”
“ဟုတ်ကဲ့ ဒီမှာပါ ဆရာ… ။ ”
” အဒေါ်ရဲ့ အစာအိမ်က အတော်လေး ထူနေတာကို တွေ့ရပါတယ်… ဒါကြောင့် အစာတွေ ကောင်းစွာ မချေနိုင်ပဲ အစားမစားနိုင်ဖြစ်နေရတာပါ… ..။ ဆေးစစ်ချက်အရ မသင်္ကာစရာတွေ့ရပေမဲ့ …ဘာဆိုတာကို ကျွန်တော် မပြောပြချင်သေးပါဘူး … ။ အတိကျ ထပ်သိရဖို့ကို ရန်ကုန်မှာတက်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ပြသသင့်တယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်…။ ရပါပြီ အဒေါ် သွားလို့ရပါတပြီ…. အဒေါ်နဲ့ အတူ ပါလာတဲ့ လူတယောက်လွှတ်ပေးပါဦး ….. ”
” ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ကျွန်တော်ဦးတင်ပါ … ဒေါ်ကျင့် အမျိုးသားပါ… ”
” ကဲဦးလေး ထိုင်ဗျာ …. ရောဂါ အကြောင်းလေး နည်းနည်းပြောပြချင်လို့ ခေါ်တာပါ … ။ အဒေါ့်ရောဂါကို ကျွန်တော်မသင်္ကာဘူးဗျ … ဆေးစစ်ချက်မှတ်တမ်းတွေ အရ … အစာအိမ်မှာ ပြသနာ တစ်ခုခု ရှိနေပါတယ်… စိတ်ပူ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေနေပါ… ကင်ဆာလို့တော့ ကျွန်တော် တပ်အပ် မပြောချင်ပါဘူး … သေချာအောင် ရန်ကုန်သွားပြီး စစ်ဆေးပါလို့ အကြံပြုပါတယ် … ။ စောစီးစွာ ပြသလျှင် လုပ်သင့်တာ လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်… အချိန်မဆွဲပါနဲ့ လို့ပဲ ကျွန်တော် မှာချင်ပါတော့တယ်…။ ”
ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီး ပြန်ထွက်လာသော ဦးတင်ကို ဇနီးသည်က ကဗျာကယာ မေးလိုက်သည် … ။
“တော့်ကို ခေါ်ပြီး ဘာပြောတာတုန်း … ကျုပ်မှာ ဘာရောဂါရှိလို့တုန်း … ”
” ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး ကွာ … စောစော စီးစီး ရန်ကုန်တက်ပြီး ပြသလျှင် ပိုကောင်းတယ်လို့ အကြံပေးတာပါ…..”
“ရန်ကုန် သွားရမယ် ဟုတ်လား… ကျုပ်တို့ပိုက်ဆံတွေ ကုန်မှာပေါ့ … မသွားချင်ပါဘူးတော် အစားမစားနိုင်တာ ဒီလောက်နဲ့ ဘာတွေ များ ထပ်စစ်ဆေးရမှာလဲ … ကျုပ်တော့ ရွှာပဲ ပြန်ချင်တော့တယ် တော့ .. ”
” မယ်ကျင်ရယ် အစားမစားနိုင်ပဲ ဒီလိုပဲ နေနေလျှင် နောက်ဆုံး လုံးပါးပါးမှာပေ့ါ ဟ … ငါတို့ကလည်း ပြေးကြည့်မှ နှစ်ယောက်တည်းရှိတာလေ… ။ ကျန်းမာရေအတွက်ပဲ ကုန်ပါစေတော့ဟာ ” ဟု ကပ်စီးနည်း ဦးတင်ပြောသည် … ။
“ကြီးကြီးတို့ ပြန်လာပြီလား … ဆေးစစ်ချက်အရ ဘာဖြစ်တာတဲ့လဲဟင် … ”
သောက်ညှင်ကပ်လာပြီ…. ပို့စ်တပုဒ်တင်ရတာ ခက်ခဲလိုက်တာ …
အီးတုံးလေး ခေါင်းစဉ်မှာ (၄) နှစ်ခုဖြစ်နေတယ် ၊ (၃)မပါသေးဘူး တစ်ခုက (၃)ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ။
မြန်မာပြည်က ကွန်နက်သေနဲ့ကတော့ စိတ်တော်တော်လေးရှည်မှရမယ်
3ကပါပြီးပါပြီ…2မတင်ခင်ပါ… ။ 1တင်တဲ့နေ့က2က တင်ပြီးသားမို့ ဖတ်လို့ရမယ်ထင်လို့ နောက်တခါ စတင်တော့ 3ကတင်တာ … ပြန်ရှာတော့ 2ပျောက်နေရော… ဒါနဲ့… ဗြောက်သောက်ဖြစ်နေတာ…။
လေးနှစ်ခုက ခေါင်းစဉ်သာ ထပ်တာ အကြောင်းရာက 5နဲ့ ရောနေတယ်… ။ တင်တုန်းကတော့ ပို့စ် နှစ်ခုက သပ်သပ်စီပါ…နောက်မှ ဘယ်လိုရောသွားလဲ မသိတော့ဘူး … ပြင်ဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်… ။ ကော်နက်ရှင်မကောင်းဘူး … ဆိုးလွန်းတယ်… ။